Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
UShi Han Esifundazweni SaseHebei
Ngazalelwa emndenini ompofu wabalimi. Ngangihlakaniphile kusukela ngisemncane, kangangokuthi ngangingalwi nezinye izingane futhi ngangilalela abazali bami, okwangenza “intombazane elungile” evamile emehlweni abantu abadala. Abanye abazali babenomona kakhulu ngabazali bami, bethi banenhlanhla yokuba nendodakazi elunge kangaka. Futhi ngale ndlela, ngakhula nsuku zonke ngizwa ukunconywa abantu abangizungezile. Lapho ngisesikoleni samabanga aphansi, imiphumela yami yasesikoleni yayimihle kakhulu, futhi njalo ngangiba ngowokuqala ezivivinyweni. Ngesinye isikhathi, ngathola onke amamaki emncintiswaneni wendaba owawubanjwe yidolobha lakithi, ngatholela isikole sami ukuhlonishwa. Uthisha omkhulu akazange kuphela anginike umklomelo kanye nesitifiketi, futhi waphinda wangincoma phambi kwesikole sonke wase enxusa abafundi ukuba bafunde kimi. Ngokushesha ngaba “usaziwayo” wesikole, futhi abafundi engangikanye nabo baze bangiqamba igama lokuthi “ngingujenene onqoba njalo.” Ukunconywa othisha bami, umona wengangifunda kanye nabo, kanye nokutotoswa abazali bami kwanginikeza umuzwa wokuba mkhulu enhliziyweni yami, futhi ngajabulela kakhulu umuzwa wokuhlonishwa yiwo wonke umuntu. Ngalokho, ngangikholwa ngokuqinile ukuthi injabulo enkulu ekuphileni yayiwukuhlonishwa ngabanye, nokuthi umuzwa wenjabulo utholakala ngokudunyiswa ngabanye. Ngokufihlekile ngazitshela: Akunandaba ukuthi kunzima nokuthi kukhandla kangakanani, kufanele ngibe umuntu onodumo nesikhundla, futhi ngingabukelwa phansi ngabanye. Kusukela lapho, izaga ezinjengokuthi “Umuntu ushiya igama lakhe ngemuva kuzo zonke izindawo ahlale kuzo, njengoba nehansi likhala kuzo zonke izindawo elindizela kuzo” nesithi “Abantu kumele bahlale bephokophela ukuba babe ngcono kunabesizukulwane sabo” zaba yisiqubulo sami ekuphileni.
Nokho, lapho ngineminyaka eyi-13 ubudala, ubaba wami wagula kakhulu futhi wangeniswa esibhedlela, okwabeka umndeni wethu owawumpofu ngaphansi kwesikweletu esinzima. Lapho ngibona ubaba wami elila ngobuhlungu bokugula nokuzikhandla kukamama wami ukuze sikwazi ukuphila, ngaphatheka kabi kakhulu ngangokuthi ngafisa kwangathi ngangingakhula masinyane ukuze ngihlanganyele nabo usizi nobuhlungu. Ngakho ngenza isinqumo esinzima sokuba ngiyeke isikole, ngicabanga: Ngisho noma ngingayi esikoleni, ngeke ngenze kabi ukwedlula abanye. Ngizoba umuntu wesifazane oqinile nophumelelayo lapho sengikhulile, futhi nangaleso sikhathi ngizobe ngisakwazi ukuphila impilo enhle! Ngenxa yokwenza kwami kahle ezifundweni zesikole, “ngangiwusaziwayo omncane” komakhelwane bami. Ngakho, lapho izindaba zokuyeka kwami isikole zisabalala, abantu endaweni yonke baqala ukukhuluma ngakho, bathi: “Le ntombazane iyisiwula kakhulu! Ukuyeka isikole kuzolimaza ikusasa layo!” nokuthi “Akekho umuntu ozohlonipha abantu abangafundile. Uzohlupheka futhi abe mpofu ukuphila kwakhe konke!” Njengomuntu owayevame ukuthola ukunconywa kusukela esemncane, umuzwa wesicefe wokuthi “i-phoenix ewile ingcono kunenkukhu” ngokushesha wangifikela. Ngangesaba ukuphumela ngaphandle, ngesaba ukuhlangana nabantu, ngesaba umuzwa wokubukelwa phansi. Ukuze ngigweme lobu buhlungu, ngangiphumela ngaphandle kwekhaya lakithi ngokuqabukela kwaze kwaphela iminyaka emibili egcwele, futhi ngangithula ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi esifanayo, isifiso sami sokuba ngowesifazane oqinile nophumelelayo saqina ngisho nakakhulu, ngakho ngemva kweminye iminyaka emibili, ngaphumela ngaphandle ukuze ngiyoqala ukusebenza. Ngasebenza emisebenzini eminingi, kodwa ngangisheshe ngiyeke ngenxa yokuthi isikhathi ngasinye ngangiba nomuzwa wokuthi umsebenzi ukhathaza futhi ucindezela kakhulu, noma iholo lincane kakhulu, noma umphathi wami wayengenamusa. Ngemva kokwehluleka ngokuphindaphindiwe, ngadumazeka kakhulu futhi ngaba nomuzwa wokuthi iphupho lami lokuba umuntu wesifazane oqinile nophumelelayo lase liqhele kakhulu kokungokoqobo.
Ngo-2005, ngaba nelungelo lokwamukela umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla wezinsuku zokugcina. Kusukela lapho, indlela yami yokuphila kanye nempilo yami yonke iguquke ngokuphelele. Ngabona ezwini likaNkulunkulu ukuthi: “Isimiselo somuntu silawulwa izandla zikaNkulunkulu. Awukwazi ukuzilawula: Naphezu kokushabasheka futhi ematasatasa ngaye uqobo, umuntu akakwazi ukuzilawula ngokwakhe. Uma ubungawazi amathemba akho siqu, uma ubungalawula isimiselo sakho siqu, ubusengaba ulokhu uyisidalwa?” (“Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu anamandla angithinta ngokujulile enhliziyweni yami, angenza ngaqonda ukuthi isimiselo somuntu ngamunye sisezandleni Zakhe futhi asilawulwa nhlobo abantu ngokwabo, nokuthi kungakhathalekile ukuthi yisiphi isikhathi, abantu ngeke babalekele ubukhosi nezinhlelo zikaNkulunkulu, futhi kufanele bazithobe ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu. Lena ukuphela kwendlela abantu abangaba ngayo nesimiselo esihle. Ngokuqondisa kwamazwi kaNkulunkulu, ngabona ukuthi uhlobo olunjani lomndeni engangizalelwe kulo, ukuthi ngifunde kangakani, ukuthi ngicebile noma ngimpofu ekuphileni kwami—zonke lezi zinto zinqunyelwe kusengaphambili uNkulunkulu. Akuyona into ingqondo noma amakhono ami angayiguqula. Ngangikade ngifuna ngokungangabazi ukuba ngowesifazane oqinileyo, ngikholwa ukuthi ngangingethembela emandleni ami ukuguqula isiphetho sami. Kodwa emva kokwehlelwaubunzima obuningi, ngizwa usizi oluningi, ngangigcine ngingakutholanga engangikufuna. Manje ngacabanga ngabo bonke ubuhlungu engangidlule kubo; kwakungewona umphumela wokungabazi ubukhosi bukaNkulunkulu nokuzabalaza ngenkani ngiphikisa isimiselo? Manje ngase ngazi ukuthi ngangingaphunyuka kubo bonke lobu buhlungu ngokuza phambi kukaNkulunkulu nokwamukela nokuthobela izinhlelo namalungiselelo Akhe. Ngemva kokuqonda intando kaNkulunkulu, angibange ngisakhungatheka ngengangihlangabezana nakho, futhi angibange ngisaba nandaba ngokuthi abanye abantu bathini. Kunalokho, ngazimisela ngokukholwa kuNkulunkulu nangokufuna ngokufanele iqiniso, futhi ngiphile impilo enenjongo. Ngemva kwalokho, ngaphikelela ekufundeni amazwi kaNkulunkulu nsuku zonke, ngathandaza, ngacula amaculo, futhi ngahlanganyela imihlangano kanye nodadewethu nabafowethu. Ngenxa yokuqonda ngokushesha kwami iqiniso nangokulilangazelela kwami, ngazuza ukwaziswa udade owayenginisela, okwangenza ngazizwa nginokujabula okukhulu ngaphakathi. Ngemva kokungena ebandleni, ngezwa abaholi bebandla bethi kufanele bagxile ekungiqeqesheni, okwenza kwaba nzima kakhulu kumi ukubamba injabulo esenhliziyweni yami futhi kwaphinde kwanginika umdlandla owengeziwe ekunyatheleni kwami. Ngakho ngazitshela: Kufanele ngifune ngayo yonke inhliziyo nangomphefumulo wami! Ngeke ngibenzele phansi abaholi bebandla. Ngisho noma nje kungenxa yedumela lami elihle, kufanele ngisebenze kanzima ukuze lapha ngithole udumo nesikhundla engingazange ngikuthole ngaphandle ezweni. Ngaleso sikhathi, ngangingakhathazeki nhlobo ngentando kaNkulunkulu. Ukuphela kwento eyayisengqondweni yami kwakuwudumo, ingcebo, nesikhundla okwakuphambi kwami ngaleso sikhathi, njengemiqhele ekhangayo eyayingivayizisela njalo izandla.
Masinyane ngemva kwalokho, ngenza umsebenzi wokunisela amakholwa amasha ebandleni. Ukuze ngithole ukutuswa kakhulu odadewethu nabafowethu, futhi ngiphile ngokuvumelena nesihloko “sokugxila ekuqeqesheni,” nganquma ukwenza umsebenzi wami ngawo onke amandla ami. Ngacabanga ukuthi kuphela nje uma ngithandeka kodadewethu nabafowethu khona-ke noNkulunkulu futhi ngokusobala uzongithanda. Ngenxa “yokusebenza nomzamo onzima” wami, ekugcineni ngakwazi ukufeza isifiso sami ngemva kwesikhathi esithile, ngathola ukudunyiswa nesikhuthazo sodadewethu nabafowethu. Ngazithola ngicabanga: Ukuthi ngiyathandeka kodadewethu nabafowethu abaningi kangaka kufanele kusho ukuthi ngingcono kunabanye abantu. Uma abaholi bebandla bazi lokhu, ngokuqinisekile bazongikhuphulela esikhundleni futhi banginikeze isikhundla esibalulekile. Khona-ke, ikusasa lami nakanjani lizogcwala amathuba angenakulinganiswa. Ngenxa yokuthi ngangiphila ngokunganaki nangokuzanelisa, ngokungaqondile ngaqala ukwenza umsebenzi wami ngendlela yokugcina icala futhi ngayeka ukunisela ngenkuthalo amakholwa amasha. Ngenxa yalokho, amanye amakholwa amasha awakwazanga ukuthola ukuniseleka kwangempela futhi aphila ngokuba nombono ophambene nangokuba buthakathaka. Ngibhekene nalesi simo ngaba nokuthukuthela okukhulu futhi ngacabanga: Ngihambe ibanga elide ukuze ngithole “udumo” enginalo namuhla. Kungenzeka kanjani ukuthi ngivumele amakholwa amasha ukuba aqhubeke ngale ndlela? Uma abaholi bebandla bengakuthola, ngokuqinisekile bazothi angifaneleki futhi kungenzeka ngisho nokuthi bamise umsebenzi wami. Ingabe akuzobe sekuphelile kanjalo ngami? Kufanele ngenze okuthile ukuze ngilungise lesi simo. Ezinsukwini ezalandela, ngangiya ngaphandle nsuku zonke ukuze ngiyosekela amakholwa amasha. Ngezinye izikhathi, ngenxa yomhlangano owodwa, ngangikhuphuka izintaba ezimbalwa futhi ngihambe amahora amathathu kuye kwamane ukuya kanye nokubuya, kodwa angizange ngicasuke nhlobo. Ngemva kwenyanga, ngangikhathele kakhulu, kodwa ngenxa yokuthi nganingenawo umsebenzi kaMoya oNgcwele, ukwabelana kwami ngezwi likaNkulunkulu kwakunesicefe futhi kungenamfudumalo, nokwaholela ekubeni isimo samakholwa amasha singaguquki ngokushesha. Kwangihlupha kakhulu lokhu kangangokuthi ngaphathwa yikhanda, kodwa ngangilokhu ngingaboni ukuthi kufanele ngize phambi kukaNkulunkulu ukuze ngizihlole. Ngenxa yokungabi nampumelelo emsebenzini wami isikhathi eside, okwabangela umonakalo empilweni yamakholwa amasha, ekugcineni kwabekwa omunye endaweni yami. Ngesikhathi ngifika ekhaya kwaba sengathi ngiwela phansi emhlabeni ngisuka esibhakabhakeni. Umzimba wami wonke ngawuzwa uphelelwa ngamandla futhi waba buthakathaka. Ngacabanga indlela odadewethu nabafowethu abaningi ababengibheka ngayo esikhathini esedlule, kodwa manje ngase ngiwele phansi kangaka. Bazongibheka kanjani odadewethu nabafowethu uma bethola lokhu? Lapho ngicabanga ngakho kakhulu kwaba yilapho ngikuzwa ngokwengeziwe ukungakwazi ukubhekana nodadewethu nabafowethu, ngakho ngenqaba ukuya ngaphandle emihlanganweni futhi esikhundleni salokho ngahlala ekhaya ngikhala nsuku zonke. Ngangizwa ubuhlungu ngaphakathi. Ngolunye usuku, ngabona amazwi alandelayo kaNkulunkulu: “Ekufuneni kwakho, unokucabanga okuningi kakhulu komuntu ngayedwana, amathemba, kanye nekusasa. Umsebenzi wamanje uqondene nokubhekana nokulangazelela kwakho isikhundla kanye nalokho okukhulu okulangazelelayo. Amathemba, ukulangazelela[a] isimo, kanye nokucabanga konke kumele isimo sakudala sobusathane. … Eminyakeni eminingi, imicabango abantu ababethembele kuyo ukuze baphile beyilokhu idlavuza izinhliziyo zabo kangangoba baba ngabaheshayo, abanobugwala, kanye nabadelelekile. Akuve nje kuwukuthi bantula amandla okulangazelela kanye nesisombululo kodwa sebenomona, baluhlaza, futhi bagcwele intando yabo. Bantula ngempela izisombululo ezedlula ububona uqobo, nokungaphezulu, abanaso nesincane isibindi sokuchitha lezi zithiyo zala mathonya amnyama. Imicabango kanye nezimpilo zabantu zibolile, imibono yabo ngokukholelwa kuNkulunkulu isamibi ngendlela engakholakali, futhi nalapho abantu bekhuluma ngemibono yabo ngokukholelwa kuNkulunkulu, ukukuzwa akubekezeleki. Bonke abantu bangamagwala, bayehluleka ukwenza umsebenzi, bayanyayisa, futhi babuthaka. Abawanyanyi amandla obumnyama, futhi abaluzwa uthando lokukhanya kanye neqiniso; kunalokho, benza konke okusemandleni ukukuxosha” (“Kungani Ungazimisele ukuba Isiqhathaniso?” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kwaba ngokwambulwa okuqondile kwamazwi kaNkulunkulu kuphela okwangenza ngabona umbono wami wokukholwa kuNkulunkulu ukuthi wawumubi kusukela ekuqaleni. Ngafuna ukusebenzisa ukukholwa kwami kuNkulunkulu ukuze ngizuze udumo, ingcebo, nesikhundla engahluleka ukukuthola ezweni, futhi ngokungafanele ngacabanga: Ngangizokhethwa futhi ngibekwe esikhundleni esibalulekile kuphela uma ngithola udumo kodadewethu nakubafowethu, khona-ke noNkulunkulu futhi uzongithanda futhi angincome. Ngaphansi kokubuswa yile micabango, ngaba buthakathaka futhi ngenyanyeka. Lapho odadewethu nabafowethu bengincoma, ngangiba nokuzethemba kakhulu, kodwa lapho ngilahlekelwa yilezi zinto, ngangidumala ngokushesha futhi ngangicindezeleka, ngibe nombono ophambene futhi ngihlehle. Lokhu kwakuwukukholwa kanjani kuNkulunkulu? Ukuphela kwento engangikholwa kuyo kwakuwudumo, ingcebo, nesikhundla! Inhloso kaNkulunkulu kwakungekhona ukungiqeqesha ukuze ngibe nethalenta lokusebenza elihle, futhi ngaphezu kwalokho bekungekhona ukuvumela ukuba ngisebenzise ukufeza umsebenzi wami ukuze nganelise izifiso zami siqu. Kunalokho, wayethemba ukuthi, ngenqubo yokufeza umsebenzi wami, ngangizothola ubuthakathaka bami futhi ngibone amazwi nomsebenzi kaNkulunkulu, bese ngiqonda futhi ngithole iqiniso elengeziwe, futhi ekugcineni ngithole insindiso kaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, kwakuwukuthi futhi ngisebenzise ulwazi lwami nokuqonda iqiniso ukuba ngondle odadewethu nabafowethu ababesanda kukholwa kuNkulunkulu, futhi ngibasize babeke isisekelo endleleni yeqiniso ukuze bangene endleleni efanele yokukholwa kuNkulunkulu ngokushesha ngangokunokwenzeka. Nokho, angizange ngifune izinhloso zikaNkulunkulu njengoba njalo ngangilwela udumo nesikhundla, kanye nesifiso somuntu siqu sokuvelela. Ekugcineni, angizange ngithole nhlobo umsebenzi woMoya oNgcwele, ngakho kungakhathaleki ukuthi ngangifaka umzamo kangakanani, ngangingakwazi ukunisela ngendlela efanele amakholwa amasha. Ngemva kokuba sengiyekisiwe ukwenza umsebenzi wami, ngaba nombono ophambene kakhulu futhi ngangaziqonda izinhloso zikaNkulunkulu, ngacabanga ukuthi ngangingasenathemba lokuthola insindiso kaNkulunkulu. Kwaba ngalesi sikhathi lapho ngokungazelele ngakhumbula amazwi kaNkulunkulu: “Anginandaba nokuthi umsebenzi wakho onzima ufaneleke kangakanani, nokuthi izimfaneleko zakho zihlaba umxhwele kangakanani, nokuthi ungilandela eduze kangakanani, nokuthi waziwa kangakanani, noma ukuthi usungcono kangakanani umbono wakho; uma nje ungakwenzi engikufunayo, awusoze wanconywa Yimi” (“Iziphambeko Ziyokwenza Umuntu Aye Esihogweni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Ukuthi umuntu ufuna ngobuqotho akunqunywa indlela abanye abamahlulela ngayo noma indlela abantu abamzungezile abambheka ngayo, kodwa kunqunywa ukuba kwabo noMoya oNgcwele nokuthi uMoya oNgcwele ube khona kubo, futhi ukuzimisela kubaluleke kakhulu kungakhathaliseki ukuthi isimo sabo siyashintsha noma banolwazi ngoNkulunkulu ngemva kokudlula emsebenzini kaMoya oNgcwele isikhathi esithile …” (“UNkulunkulu Nomuntu Bayongena Ndawonye Ekuphumuleni” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu ngaqonda izinhloso nezimfuneko Zakhe. Kwahlaluka ukuthi ukholo lwami lwangaphambili lokuthi isikhundla esiphakeme sasisho ikusasa elithembisa kakhulu kanye nokunconywa kakhulu uNkulunkulu kwakulinganisa umsebenzi kaNkulunkulu ngokombono wasemhlabeni, kwakungekubi kakhulu. Indlela uNkulunkulu alinganisa nanquma ngayo isiphetho somuntu ayisekelwe esikhundleni sakhe, ebudaleni, noma enanini lomsebenzi awenzile, kodwa ekutheni ulitholile yini iqiniso nokuthi ulwenzile yini uguquko lwesimo. Uma umuntu engakalitholi iqiniso noma engakalwenzi uguquko lwesimo ngomsebenzi kaNkulunkulu, khona-ke ukuthi isikhundla sakhe siphakeme kangakanani noma bangakanani abantu abamncomayo konke kuba yize. Ngeke nje angatholi ukwamukelwa uNkulunkulu, futhi uyonyanyeka, enqatshwe, futhi alahlwe uNkulunkulu. Kuphela ngokunaka ukwazi uNkulunkulu nokuzazi yena ngesikhathi efeza umsebenzi wakhe, kanye nokusebenzisa okuhlangenwe nakho kwakhe okungokoqobo ekuniseleni nasekusekeleni odadewethu nabafowethu, uzokwazi ukuxazulula izinkinga ezingokoqobo, athole indlela yokuqondisa odadewethu nabafowethu, futhi enze umsebenzi wakhe ngempumelelo. Umuntu onjengami, ongafunanga nhlobo ukungenanokuguquka kwakhe ngesikhathi esebenza, kodwa kunalokho ngokuphuphutheka ofune udumo, ingcebo, nesikhundla, ekugcineni ubangela kuphela ukulimala kodadewethu nakubafowethu abaningi, futhi ekugcineni uzobhujiswa. Lapho ngicabanga ngalokhu, ngaqonda ukuthi ukumiswa emsebenzini wami yibandla kwaba yisimo esasihlelwe uNkulunkulu siqondiswe ezinhlosweni nasezifisweni zami ezimbi, kanye nasemvelweni yami enokukhohlakala, ukuze ngizihlole futhi ngizazi mina, ngiguqule imibono yami engalungile kwengikufunayo, bese ngilandela ngokushesha ngangokunokwenzeka indlela efanele yokufuna iqiniso. Ngaleso sikhathi, ngezwa ngempela uthando, ukunakekelwa, nomcabango kaNkulunkulu, futhi ngizithola sengithandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Ngiyabonga ngokuthululela uthando Lwakho olukhulu phezu kwami. Ngangivame ukungaqondi izinhloso Zakho futhi ngicabanga ukuthi ukuba nodumo, ingcebo, nesikhundla kuyoqinisekisa ukwamukelwa Nguwe. Lokhu kwangenza ngangakunaka nhlobo ukungena eqinisweni ngesikhathi somsebenzi wami. Engangimane ngikwenza kwakuwufuna ngobumpumputhe udumo nengcebo, okuphambene ngokuphelele nezimfuneko Zakho. Ngokukhanyiselwa izwi Lakho, manje sengiyaqonda izimfuneko Zakho. Ngeke ngisamelana ngokuqondile nomsebenzi Wakho njengoba ngenzile esikhathini esedlule. Ngizofuna uguquko lwesimo futhi ngilandele indlela elungile yokufuna iqiniso.”
Kungakabiphi, ibandla laphinde langihlelela ukuba nginisele amakholwa amasha, futhi lenza ukuba ngihlale ndawonye nodade osemusha. Udade osemusha wayenobuntu obungajikelezi futhi obunothando, ngakho ngacabanga: Njengoba ngingumuntu othulayo nongathandi ukukhuluma kakhulu, kanti udade osemusha ukhuluma kakhulu nangokukhululekile, singasebenzisa leli thuba ukufunda kulokho omunye aqine kukho ukuze silwe nobuthakathaka bethu. Nakuba ngacabanga ngale ndlela, kwakuselokhu kunokuxabana nokungezwani ekusebenzisaneni kwangempela kwethu. Ukuze ngiguqule lesi simo, ngaqala ukukhuluma nokwenza ngokucophelela okukhulu, ngesaba ukuthi kungase kube nezehlakalo ezingajabulisi eziningi. Udade osemusha wayevame ukuya emsebenzini. Ngibona ukuthi wayematasa ngaso sonke isikhathi, nganquma ukwenza wonke umsebenzi wasendlini ukuze ngimenze abe nombono omuhle ngami futhi ngisize ekulondolozeni ubuhlobo bethu. Ngangingalindele ukuthi ngemva kwezinyanga ezimbalwa, ubuhlobo bethu babuyoba muncu kakhulu, engakuthola kucindezela futhi kubuhlungu kakhulu. Nokho, angizange ngizihlole futhi ngibone ukukhohlakala kwami futhi kunalokho ngagxilisa ukunaka kwami kudade osemusha, ngacabanga ukuthi wayenobunzima bokuzwana nami futhi wayenokungacabangeli okukhulu. Ngolunye usuku, lapho udade ebuya emsebenzini futhi engibona ngenza imisebenzi, walibeka ngembaba elokuthi ngangimane ngenza lokhu ngenxa yentshisekelo. Lapho ngizwa lokhu, angikwazanga ukubamba izinyembezi zami zosizi ukuba zingaphumi. Ngaleso sikhathi, ngangifuna ngempela ukuhamba ngokushesha futhi ngingaphinde ngibuye. Kodwa ngacabanga indlela udade ayemncane ngayo kunami, nokuthi wayengenaso isikhathi eside ekholwa kuNkulunkulu. Uma ngangingeke ngikwazi ukuzithiba, futhi ngiqhubeke nokumbambela igqubu, khona-ke babezongibheka kanjani abaholi bebandla kanye nabanye odadewethu nabafowethu? Babeyothi ngibonise ukungabi naluthando ngodade osemusha nokuthi angiyena umuntu onokwethenjelwa. Khona-ke ngangiyobabheka kanjani? Ngibhekene nalesi simo, ngangingazi ngempela ukuthi kufanele ngenzeni. Nginobuhlungu, ngeza phambi kukaNkulunkulu ukuze ngithandaze: “O Nkulunkulu! Nginobuhlungu obukhulu. Kusengathi kunamatshe asindayo angicindezela phansi, enza kungenzeki kimi ukuba ngibe namandla okuphunyuka. Kodwa ngikholwa ukuthi izinhloso Zakho ezinhle zikulesi simo esingehlele. Ngicela ukuba kuphela ungikhanyisele ukuze ngiqonde izinhloso Zakho futhi ngifunde isifundo okufanele ngisifunde.” Ngokushesha ngemva komthandazo, kwafika udade othile ngenhlanhla wangithola, ngakho ngamthululela isifuba sami futhi ngaxoxa naye mayelana nesimo sami. Ngemva kokungilalela, udade wathi: “Wonke umsebenzi kaNkulunkulu ungenxa yokusindisa isintu, futhi zonke izimo ezisehlelayo zenzelwe ukuba zisinike izifundo. Uma sinalezi zinto eziphambene ngaphakathi kwethu, kusho ukuthi sisenobuthi obuthile bobusathane ngaphakathi kwethu obenyanywa uNkulunkulu. UNkulunkulu uzosihlanza futhi asiguqule ngalezi zimo….” Ngemva kokuba udade esehambile, ngaphenduphenduka embhedeni futhi angakwazi ukulala, ngicabanga: Yini uNkulunkulu ayihlanzayo nayiguqulayo kimi? Ngakho, ngavuka ngase ngifunda izwi likaNkulunkulu: “… ningayibona imvelo yomuntu nokuthi ungokabani ngokubuka indlela abuka ngayo impilo nemigomo yakhe. USathane wonakalisa abantu ngemfundo nangethonya lohulumeni bamazwe nangabantu abadumile nabakhulu. Amanga nemibhedo yabo sekube yimpilo nemvelo yabantu. ‘Umuntu akazibheke yena bese uSathane ethatha osekugcineni’ amazwi obusathane aziwa kakhulu asefakwe kuwo wonke umuntu aba yimpilo yomuntu. Akhona amanye amazwi enkambiso yokuphila afana nalawa. … Busebuningi ubuthi bobusathane ezimpilweni zabantu, ekuphatheni kwabo izinto, nasekuziphatheni kwabo nokubhekana nabanye – zicishe zingabi ngisho nelincane iqiniso – isibonelo, izinkambiso zokuphila kwabo, amazwi abo empumelelo, noma izindlela zabo zokwenza izinto. Wonke umuntu ugcwaliswe ubuthi bukadrako omkhulu obomvu, futhi bonke buvela kuSathane. Ngakho, okugobhoza emathanjeni nasegazini labantu konke kuyizinto zikaSathane” (“Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” encwadini ethi Umlando Wezinkulumo ZikaKristu). Njengoba ngangizindla ngamazwi kaNkulunkulu, ngacabanga ngokujulile: Kulezi zinyanga ezimbalwa ezedlule, kungani bengiphila ngokucindezeleka nangobuhlungu? Yibuphi ubuthi bukaSathane obubusa ukuziphatha kwami? Ngaphansi kokukhanyiselwa uNkulunkulu, ngezwa kancane kancane inhliziyo yami iba nokukhanya ngaphakathi, ingenza ngibone ukuthi isizathu esasenza ukuba njalo ngifune udumo nesikhundla kwakuyithonya kanye nokudidwa ubuthi bukaSathane obunjengokuthi “Umuntu ushiya igama lakhe ngemuva kuzo zonke izindawo ahlale kuzo, njengoba nehansi likhala kuzo zonke izindawo elindizela kuzo,” “Njengoba isihlahla siphilela amagxolo aso, umuntu uphilela ubuso bakhe,” nokuthi “Abantu kumele bahlale bephokophela ukuba babe ngcono kunabesizukulwane sabo.” Lobu buthi bobusathane ngokungaqondile baba yisiqondiso ekuziphatheni nasemigomweni yami ekuphileni, bangenza ngokuyiphutha ngakholelwa ekutheni udumo nesikhundla kuphela okungenza ukuphila kube nenjongo futhi kube yigugu. Kwaba ukubuswa yilobu buthi okwangenza ngakhathazeka kakhulu ngedumela nokuzithwala, kanye nokuthi yini abanye abayicabangayo ngami. Yonke into engangiyenza nengangiyisho yayiwukufuna ukulondoloza isithunzi nesikhundla sami ezinhliziyweni zabanye abantu. Masinyane lapho kuba khona okuthile okuthinta idumela noma ukuzithwala, ngangiba nobuhlungu futhi ngikhathazeke. Konke lokhu kuhlupheka nentukuthelo kwakungenxa kaSathane. Ngakhumbula ukuthi kusukela ngaqala ukuhlala nodade osemusha, njalo ngangisebenzisana naye ngokuqapha ukuze ezoba nombono omuhle ngami, ngesaba ukuthi kungenzeka abe nombono omubi ngami uma ngisho noma ngenza noma yini kabi. Ngakho ngangiphilela ukujabulisa abanye futhi ngenza njengesiwula. Lapho udade osemusha engeluleka, angizange ngisebenzise ithuba lokuba ngizazi, kodwa ngaba nemibono eminingi futhi ngaba nokumbandlulula udade ngenxa yokuthi ngangingafuni ukulahlekelwa yisithunzi, futhi ngaze ngafuna ngisho nokusibalekela lesi simo. Ukuze ngilondoloze idumela kanye nesithunzi sami, angizange ngilokothe ngikhulume ngokukhululeka nodade osemusha ngisho nalapho ngezinye izikhathi ngimbona eveza inkohlakalo encane noma enza into engahambisani neqiniso, ngesaba ukuthi kungenzeka ngimphathe kabi futhi ngenze ubuhlobo bethu bube muncu kakhulu. … Nokho, lobu buthi bukaSathane, bangenza ngakhula ekuzenziseni kanye nasebuqilini, okwenza ukuphila kwami kwakhathaza futhi kwaba munyu kakhulu. Ngangifuna ngempela ukuphuma kulo mphandu omnyama futhi ngikhumule ubuso bami benkohliso, ukuze ngikwazi ukuphila ngenkululeko nangokukhululeka okuphelele. Kodwa ngangingakwazi ukukwenza lokho ngingedwa, ngakho ngaguqa phambi kukaNkulunkulu futhi ngathululela inhliziyo yami Kuye: “O Nkulunkulu! Ngangivame ukubheka ukudunyiswa nodumo njengohlobo lwenjabulo. Manje ngiyabona ukuthi ngangenza iphutha. Ukufuna lezi zinto akuyona injabulo emangalisayo kodwa ubuhlungu, ukucindezeleka, ukugqilazeka, kanye nokuzincisha inkululeko. Manje futhi sengibona ngokucacile ukuthi lokhu kwakungamafilosofi kaSathane ayengikhohlisa futhi engilawula, angenze ngifune udumo, ingcebo, nesikhundla, kanye nesithunzi nedumela. Bonke ubuhlungu bami bulethwe uSathane. O Nkulunkulu! Angifuni ngempela ukuqhubeka ngiphile ngamafilosofi kaSathane. Nginxusa insindiso Yakho; ngibonise indlela efanele yokwenza, futhi ungiphe ukuzethemba namandla okuba ngigqashule ogibeni lukaSathane bese ngenza ngokuvumelana nezimfuneko Zakho.” Ngemva komthandazo, ngezwa ukukhululeka engangingakaze ngikuzwe ngaphambili. Ngesikhathi esifanayo, ngabona ukuthi ngangingaxazulula kuphela isimo sokukhohlakala kwami ngokufuna iqiniso. Ngemva kwalokho, ngabona isiqephu esilandelayo sezwi likaNkulunkulu: “Uma ungagxili ebudlelwaneni bakho nabantu kodwa ulondoloze ubudlelwane obufanele noNkulunkulu, uma uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi ufunde ukumlalela, ngokwemvelo, ubudlelwane bakho nabo bonke abanye abantu buyoba ubufanele. Ngale ndlela, lobu budlelwane abakhiwe enyameni, kodwa esisekelweni sothando lukaNkulunkulu. Zicishe zingabi bikho izingxoxo ezisekelwe enyameni, kodwa emoyeni kunokuzwana kanye nothando, induduzo, nokunakekelana. Konke lokhu kwenziwa esisekelweni senhliziyo eyanelisa uNkulunkulu. Lobu budlelwane abulondolozwa ngokuncika kufilosofi yempilo yomuntu, kodwa bakhiwa ngokwemvelo ngomthwalo kaNkulunkulu. Abuyidingi imizamo yabantu—benziwa ngezimiso zezwi likaNkulunkulu. Ingabe uzimisele ukucabanga ngentando kaNkulunkulu? … Ingabe uzimisele ukunikela ngenhliziyo yakho ngokugcwele phambi kukaNkulunkulu, ungacabangi ngesikhundla sakho phakathi kwabantu?” (“Ukwakha Ubudlelwane Obufanele NoNkulunkulu Kubaluleke Kakhulu” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu embula ngokucacile indlela okufanele ngenze ngayo, futhi lokho kwakuwukuba ngibe umuntu oqotho futhi ongasakhathazeki ngodumo nengcebo noma ukulondoloza isithunzi nesikhundla sami ezinhliziyweni zabantu. Kunalokho, kufanele nginikele inhliziyo yami kuNkulunkulu ngiphakamise futhi ngibe ufakazi wamazwi kaNkulunkulu kuyo yonke into, ngenze iqiniso, futhi ngilalele uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela, ngizokwazi ukuba nokuzwana noNkulunkulu. Ukuba nokuzwana okwejwayelekile noNkulunkulu futhi ngokusobala kuholela ekubeni nokuzwana nabanye abantu. Ngakho, ngasese ngenza isinqumo sokwenza ngokuvumelana namazwi kaNkulunkulu futhi kancane kancane ngasisusa isimo sokukhohlakala kwami. Kusukela lapho, ngangivame ukuxoxa ngobuqotho nodade osemusha futhi sifunde ndawonye amazwi kaNkulunkulu. Uma sihlangabezana nenkinga ekwenzeni imisebenzi yethu esingeke sayixazulula, sasithandaza kuNkulunkulu ndawonye bese sibheka izimpendulo emazwini kaNkulunkulu. Saba nokuzwana okuhle kakhulu. Kungakabiphi, umthwalo owawusemzimbeni wami nokucindezeleka okwakusenhliziyweni yami konke kwanyamalala, kanti nokumamatheka okwase kunesikhathi eside kungekho kwavela ebusweni bami. Ngangithole ukuphumula nenjabulo yangempela eyalethwa ukwenza amazwi kaNkulunkulu. Ngibonga ngobuqotho uNkulunkulu ngokungisindisa.
Ngemva kwalezi zinyanga ezimbalwa zokucwengwa okubuhlungu, ekugcineni ngaqonda ukuthi kungani uNkulunkulu engakuvumeli ukuba sisebenzise amafilosofi okuphila ukuze silondoloze ubuhlobo nabanye abantu. Kungenxa yokuthi onke lawo mafilosofi okuphila kanye nokuthiwa yizaga kuwubuthi bukaSathane obutshalwe kubantu, futhi kungamathuluzi asetshenziswa uSathane ukuze aphuphuthekise nokuba alimaze abantu. Lawa mafilosofi obusathane angabangela kuphela ukwahlukana, ukuxabana, kanye nokufa kwabantu, futhi angaletha kuphela ukucindezeleka nobuhlungu kubantu. Lokhu kungenxa yokuthi uSathane ngokwakhe unenkohlakalo nokwahlukana, futhi amazwi kaNkulunkulu kuphela kanye nalokho akufunayo kubantu okungabenza babe nokuthula nabanye. Kungokuphila ngamazwi kaNkulunkulu kuphela nangokwenza ngokuvumelana namazwi Akhe okungenza abantu baphume emathonyeni amnyama kaSathane futhi baphile ngenkululeko nangokukhululeka okuphelele phambi kukaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, ngaphinde ngabona ukuthi ukuhlala kwami ndawonye nodade osemusha kwakuyilungiselelo elimangalisayo likaNkulunkulu, elalenzelwe ukubhekana nobuthi bukaSathane obabugxile ngaphakathi kimi kanye nezidingo zami ezingokoqobo. Ukube uNkulunkulu akazange asebenze ngale ndlela, ngangingeke ngibone ubungako bomonakalo ubuthi bobusathane obunjengokuthi “Umuntu ushiya igama lakhe ngemuva kuzo zonke izindawo ahlale kuzo, njengoba nehansi likhala kuzo zonke izindawo elindizela kuzo” nokuthi “Njengoba isihlahla siphilela amagxolo aso,umuntu uphilela ubuso bakhe” obabubenzile kimi. Ngangiyobe ngilokhu ngisakhulekela lobu buthi njengezinto ezinhle, okwakuyongenza ngizithwale futhi ngikhohlakale ngokwengeziwe, futhi ekugcineni ngiye ekuthotshisweni nasekubhujisweni. Lezi zimo nezilingo zaziyinsindiso enkulu ngempela kaNkulunkulu kimi!
Kamuva, ngakhethwa ngaba umholi webandla. Lapho ngihlangana nezinkinga ekuqaleni, ngangivame ukulalela ukusikisela okuvela kodadewethu nakubafowethu, futhi ngingakhathazeki ngendlela abanye ababezoyicabanga ngami. Kodwa akuzange kuthathe isikhathi eside ukuba isifiso sami sokufuna udumo nengcebo siqale ukukhula futhi. Ngenxa yokuthi ngangiqale ukwenza lo msebenzi ngaphambi kwabanye abaholi bebandla, ngokusobala odadewethu nabafowethu babeza kimi kakhulu lapho kunenkinga. Kancane kancane, ngaqala ukuthatheka futhi ngacabanga ukuthi ngangiselokhu ngingcono kunalowo dade. Lapho ngisemihlanganweni nalowo dade, njalo ngangikhuluma ngezimfundiso ezithile ezibonakala zibalulekile ukuze ngibukise futhi ngithole ukuqashelwa nokuhlonishwa odadewethu nabafowethu, kanye nokubenza bacabange ukuthi ngingcono kunaye. Ngesinye isikhathi, phakathi nomhlangano weqembu elincane, ngafikelwa umcabango ngemva kokuba udade esanda nje kukhuluma isikhathi esifushane: Kufanele ngikhulume kakhulu, kungenjalo odadewethu nabafowethu bazocabanga ukuthi angikahle njengaye. Ngakho, ngangenela lapho kunekhefu futhi ngaqala ukukhuluma ngingathuli. Njengoba ngangisakhuluma, umfowethu owayeseduze kwami wangingena emlonyeni: “Asinakukhuluma nje ngezimfundiso eziyize. Kufanele sikhulume ngokuhlangenwe nakho kanye nolwazi olungokoqobo ukuze sondle odadewethu nabafowethu.” Ngemva kokulalela amazwi omfowethu, ngezwa sengathi ngishaywe ngempama esidlangalaleni. Ngamehlo ami agcwele izinyembezi, ngacabanga: Ekuqaleni bengifuna ukusho amazwi ambalwa engeziwe ukuze odadewethu nabafowethu bezongibeka phezulu, kodwa manje sekungibangela amahloni! Ngaleso sikhathi, ngangifuna ukuthola umgodi wokucasha. Njengoba ngangisezwa ubuhlungu ngaphakathi, umfowethu wafunda isiqephu esisezwini likaNkulunkulu: “Abanye abantu bamkhonze ngempela uPawulu: Bathanda ukwenza izinkulumo nokusebenza ngaphandle. Bathanda ukuhlangana ndawonye bakhulume; bayathanda lapho abantu bebalalela, bebakhonza, bebazungeza. Bathanda ukuba nesithunzi emiqondweni yabanye futhi bayathokoza uma abanye bazisa isithunzi sabo. … Uma ngempela eziphatha ngale ndlela, lokho kwanele ukukhombisa ukuthi uyazidla futhi unobuqha. Akamkhonzi nhlobo uNkulunkulu; ufuna isikhundla esiphezulu futhi ufuna ukuba nethonya phezu kwabanye, ukubenza abakhe, ukuba nesiqu emiqondweni yabo. Lokhu kungumfanekiso omuhle kaSathane. Okugqamayo ngemvelo yakhe ukuzidla nobuqha, ukungazimiseli ukukhonza uNkulunkulu, nesifiso sokukhonza abanye” (“Indlela Yokwazi Imvelo Yomuntu” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Onke amazwi okwahlulela kakuNkulunkulu ayenjengenalithi ehlaba inhliziyo yami, angenza ngaba namahloni kakhulu. Ngakhumbula ukuthi ngaphambili kokukholwa kuNkulunkulu, ngangijabulela kakhulu ukuhlonishwa yiwo wonke umuntu, futhi ngangizama ngayo yonke inhliziyo nomphefumulo wami ukuba ngivelele futhi ngibe owesifazane oqinile nophumelelayo. Ngemva kokuba leli phupho seliphelile, ngacabanga ukuthi ngingafeza iphupho lami lokuba nodumo, ingcebo, nesikhundla ebandleni. Ikakhulu phakathi nalesi sikhathi, ngangincintisana ngokufihlekile nodade ukuze ngenze odadewethu nabafowethu babheke mina. Ngaphandle, ngangincintisana ngesikhundla ngimelene nomuntu, kodwa ngokuyisisekelo, ngangincintisanela abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo noNkulunkulu. Lokhu kungenxa yokuthi labo abakholwa kuNkulunkulu kufanele babheke kuNkulunkulu, bakhonze Yena, futhi banike uNkulunkulu indawo ezinhliziyweni zabo. Kunalokho, ngangifuna ukuba nendawo ezinhliziyweni zodadewethu nabafowethu, futhi ngibenze babheke mina futhi bakhonze mina. Ingabe lokho akusikhona ngempela ukumelana ngokusobala noNkulunkulu? Kungaphambi kwamaqiniso kuphela lapho ngakwazi khona ukubona ukuthi imvelo yami imelene noNkulunkulu. Uma ngingasolwa futhi ngahlulelwe uNkulunkulu futhi ngingabi nokuguquka esimweni sami, khona-ke ngisho noma ngabe ngaphandle ngibonakala nginentshisekelo nokuzikhandla ekusebenzeleni uNkulunkulu, eqinisweni ngiyobe ngenza okubi futhi ngimelana noNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, ngabona ngokucacile ukuthi uSathane wonakalisa isintu ngokuthi afake ubuthi ezingqondweni nasemiphefumulweni yaso ngezindlela ezahlukahlukene, asenze silwele udumo, ingcebo, nesikhundla, futhi ngalokho asenze sisuke kancane kancane kuNkulunkulu, sikhaphele uNkulunkulu, futhi ekugcineni asihudulele esihogweni. Ngicabanga ngalokhu, ngazithola nginokwesaba, futhi ngaqala ukwenyanya ubumpumputhe nobuwula bami, ukukhohlakala kwami okujulile, kanye nobuthi bobusathane obabugxile ngaphakathi kimi. Ukube ngangingekho ngaphansi kokubuswa udumo, ingcebo, nesikhundla, ngangingeke ngibe ngaphansi kokulawulwa yinoma ngumuphi umuntu, isehlakalo, noma into, futhi ngabe ngafuna kuphela ukwanelisa uNkulunkulu ngokufeza umsebenzi wami njengesidalwa esidaliwe. Ukube angizange ngilawulwe udumo, ingcebo, nesikhundla, ngabe, ngokufeza umsebenzi wami, ngagxila ekuphakamiseni uNkulunkulu, ngifakazele uNkulunkulu, futhi ngilethe odadewethu nabafowethu ngaphambi Kwakhe. Ukube angizange ngilawulwe udumo, ingcebo, nesikhundla, ngangingeke ngibe nokucindezeleka nokuzwa ubuhlungu nsuku zonke ekuphileni, ngingakwazi ukujabulela inkululeko nenjabulo elethwa yiqiniso. Ukube angizange ngilawulwe udumo, ingcebo nesikhundla, ngabe ngaba nokuzwana nodadewethu nabafowethu futhi saba nokusekelana nokusizana ngomoya, kunokuba ngisebenzise ukukhohlisa ukuze ngidukise abanye ukuba bangethembe futhi bangihloniphe. … Konke lokhu kwakungenxa yobuthi bukaSathane, obabungilimaze kwaze kwaba yilolo suku. USathane uyenyanyeka kakhulu futhi mubi ngempela. Eqinisweni uyidimoni elishwabadela umphefumulo! Ngaphansi kokukhanyiselwa nokuqondiswa uNkulunkulu, ngaqala ukuba nokuzimisela nesibindi sokulahla inyama yami futhi ngenze iqiniso. Ngakho ngathandaza kuNkulunkulu: “O Nkulunkulu! Umonakalo wodumo, ingcebo nesikhundla okungibeke kulesi simo sanamuhla. Ukuze ngifune lezi zinto, ngishiye ngemuva izimfuneko Zakho, ngangakulalela futhi ngamelana Nawe ngokuphindaphindiwe futhi ngakwenza wadumala futhi wanengeka. Manje ngiyazizonda lezi zinto ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngizozilahla futhi ngizishiye ngokuphelele. Ngicela ungiqondise endleleni yami engaphambili.” Kusukela ngaleso sikhathi, angibange ngisafuna ukuvelela, futhi ngesikhathi semihlangano ngaqala ukugxila ekukhulumeni ngokuhlangenwe nakho kwami okungokoqobo. Lapho odadewethu nabafowethu benezinkinga, ngokuqotho ngangivula inhliziyo yami ukuze ngixoxe nabo ngezikhathi nami engangena kuzo ezinkingeni ngase ngikhanyiselwa futhi ngaqondiswa amazwi kaNkulunkulu, ukuze baqonde izinhloso zikaNkulunkulu nokuba babone uthando lukaNkulunkulu. Lapho ngenza ngale ndlela, ngezwa ukukhululeka nokukhanyiseleka okwengeziwe ngaphakathi kwenhliziyo yami, ngenza usuku ngalunye lwaba olujabulsa kakhulu.
Ngemva kokwahlulelwa nokusolwa uNkulunkulu kanye nokwelulekwa nokuthenwa Nguye izikhathi eziningi, ngaqala ukuba nolwazi lwangempela lwemvelo yami enobusathane. Noma nini uma ngiphinde ngibhekana nezinto ezinjengodumo, ingcebo, isikhundla, nedumela, ngangithandaza ngobuqotho kuNkulunkulu bese ngibambisana Naye, futhi ngilahle inyama yami bese ngenza iqiniso. Ngesinye isikhathi, udade osebandleni elingumakhelwane wayengekho esimweni esihle. Ngemva kokuzwa lokhu, sasivame ukuyoxoxa naye futhi sithululelane izifuba. Ngemva kwesikhathi esithile, isimo sakhe sathuthuka futhi waqala ukusebenza ngenkuthalo emsebenzini wevangeli. Phakathi kwamakholwa amasha awaletha, kwakukhona othile owayelambele ngempela iqiniso futhi owathuthuka ngokushesha okukhulu. Ngakho, safuna ukumqeqeshela ukuba abe umholi webandla wamakholwa amasha. Ngalesi sikhathi, ibandla elingumakhelwane lasibhalela incwadi, licela lowo dade ukuba aye khona eyokwenza umsebenzi wakhe. Ngaphakathi ngangimadolonzima kakhulu, kodwa ngase ngiba nomunye umbono: Amabandla onke ayinto eyodwa. Lokho uNkulunkulu akufunayo ukwenza ngokubambisana. Kungakhathaleki ukuthi yiliphi ibandla ikholwa elisha eliya kulo, uma kuphela ezowenza umsebenzi wakhe, kuzoba yinto ezoduduza inhliziyo kaNkulunkulu. Ingabe umcabango wami wangaphambili wawungesiwona owodumo, ingcebo nesikhundla? Ingabe ngangingalokhu ngigxilile esithunzini nasedumeleni lami? Lokhu kwangikhumbuza amazwi kaNkulunkulu: “Abantu abanonya nabanesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijimela udumo nokuceba, ukubulalana—kuzophela nini? UNkulunkulu uye wakhuluma izinto eziningi kakhulu, nokho akekho noyedwa oye waziqonda. Abantu benza izinto becabangela imindeni yabo, futhi becabangela amadodana namadodakazi abo, imisebenzi yabo, ikusasa labo, ukuma kwabo, ukuqhosha nemali, benzela ukugqoka, ukudla nemizimba yabo—yini eyenzelwa uNkulunkulu ngempela? Ngisho nalabo abenza okuthile egameni likaNkulunkulu, bambalwa kakhulu abamaziyo uNkulunkulu. Bangaki abangacabangi ngezinto abazifunayo lapho benza okuthile? Bangaki abangabacindezeli abanye noma babacwase ngoba nje befuna ukuvikela igama labo?” (“Ababi Kumele Bajeziswe” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). Kunjalo! Bheka ukuziphatha kwami nendlela engenza ngayo. Njalo ngangifuna udumo nengcebo, akukho kulokhu okungokukaNkulunkulu. Yeka indlela enganginobugovu ngayo! Ngangijabulela ukuphakanyiswa nomusa kaNkulunkulu, kodwa ngezama ngokuzikhandla futhi kanzima nsuku zonke ukuzuza udumo, ingcebo, nesikhundla. Nakuba ngangikholwa kuNkulunkulu ngegama, ngangingenzi ngokuvumelana nezinhloso kanye nezimfuneko zikaNkulunkulu, futhi eqinisweni ngangingamlaleli nhlobo uNkulunkulu. Isilinganiso sikaNkulunkulu sokuthi umuntu ukholwa kuNkulunkulu ngobuqotho yini asisekelwe ekuziphatheni kwakhe kwangaphandle noma ekudunyisweni ngabanye, kodwa kuba sekutheni angazibeka yini phansi izinto ezisenhliziyweni yakhe ezingahambisani nezinhloso zikaNkulunkulu lapho izinto zimehlela, ukuthi angakwazi yini ukucabangela lokho okuyohlomulisa ibandla, kanye nokuthi anganelisa yini futhi athande uNkulunkulu ngakho konke. Ngemva kokuqonda izinhloso zikaNkulunkulu, inhliziyo yami ngokungalindelekile yaba nokujabula, futhi ngokushesha ngalikhulula leli kholwa elisha ukuba liye ebandleni elingumakhelwane.
Ngemva kokubona umsebenzi kaNkulunkulu iminyaka eminingana, ngaqonda ngokucace ngokwengeziwe: Udumo, ingcebo nesikhundla ngamaqhinga asetshenziswa uSathane ukukhohlisa abantu namaketanga awasebenzisayo ukubopha abantu. Abantu abaphila ngaphansi kokubuswa yiwo bangaboshwa futhi bakhohliswe yiwo, bangabi nanoma iyiphi inkululeko. Abantu abaphila ngaphansi kwezwi likaNkulunkulu baphila ekukhanyeni nasezibusisweni zikaNkulunkulu. Umuntu uzokwazi ukuthola inkululeko nokukhululeka ngokuphila phambi kukaNkulunkulu kuphela nje uma enza umzamo wokuhlangabezana nezimfuneko zikaNkulunkulu futhi enza iqiniso elifunwa uNkulunkulu. Lapho ngibheka emuva ebuhlungwini nasekuhluphekeni udumo, ingcebo, nesikhundla okungilethele khona, bese kuba umsebenzi wensindiso uNkulunkulu awenzile kimi, ngizizwa nginokwazisa nokukweleta ngempela uNkulunkulu. Ukuze angikhulule ekuboshweni udumo, ingcebo, nesikhundla, uNkulunkulu ulungiselele izimo eziyinkimbinkimbi ngokwahlukahlukene, abantu, izinto, nezigameko, futhi wangihola wase kancane kancane engiqondisa esebenzisa umsebenzi Wakhe ongokoqobo, engivumela ukuba ngihambe endleleni efanele yokuphila. Zonke izimo nazo zonke izehlakalo zahlelwa ngokuyinkimbinkimbi uNkulunkulu, futhi ngemva kwaso ngasinye kunothando olukhulu lukaNkulunkulu ngami. Ngemva kokusolwa nokwahlulelwa ngokuphindaphindiwe, kancane kancane ngabona ukuba ngokoqobo kokukhohlakala kwami. Futhi ngazuza ulwazi ngomsebenzi ongokoqobo kaNkulunkulu, ngabona ubungcwele, ubukhulu, nokungabi nabugovu kukaNkulunkulu, futhi ngezwa ngokujulile umcabango nokukhathalela kukaNkulunkulu ukusindisa isintu. Kokuhlangenwe nakho kwami kwesikhathi esizayo, ngizozimisela ukwamukela ukusola nokwahlulela kukaNkulunkulu, ukuze isimo sami sokukhohlakala sizohlanzwa ngokuphelele nokuba siguquke ngokushesha ngangokunokwenzeka, futhi ukuze ngikwazi ukuphila ukuphila okunenjongo ngempela nokuphila okuyigugu!
a. Umbhalo wokuqala ushiye ukuthi “ukulangazelela ukuthi.”
Okwedlule：Inguquko Yomuntu Owileyo
Ngo-1996 ngathola ukuphakanyiswa uNkulunkulu futhi ngamukela insindiso kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina.
Ngazalelwa emndenini ompofu wasemaphandleni owawusemuva ngokucabanga. Ngangizidla kusukela ebuncaneni bami futhi isifiso sami sesikhundla sasinamandla kakhulu.
USiqiu Edolobheni LaseSuihua, Esifundazweni saseHeilongjiang Noma nini uma ngibona le ndima elandelayo yamazwi kaNkulunkulu, “Uma kade selokhu wethemb…